Iko Chaiko Mutengo weSocial Media | Martech Zone
Iko Chaiko Mutengo weSocial Media
Muvhuro, July 25, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
The folks at Focus bvisa iyi infographic, uchigovana chaiyo data pamubhadharo, bhenefiti uye dzoka pane kudyara kwemasocial media. Ini ndinotenda chokwadi chekuti vanofungidzira maawa anoshandiswa kugadzirisa iyo yepakati uye kunyange kupa mutengo wekubatsira reshiyo yemhando yepamusoro zvigadzirwa zvinoshandisa vezvenhau. Wanga uchiziva here avhareji pamwedzi kukosha kweye Twitter muteveri iri $ 2.38 nepo pamwedzi mutengo wekuzvichengeta uri $ 1.67. Kwete zvakaipa tweturn pane kudyara!
Vanhu vakawandisa vanoona pasocial media se vakasununguka. Zvichipa huwandu hwemasvikiro muvhareji mushambadzi anofanirwa kutarisira, zviwanikwa zviwanikwa, kusashanda kwematurusi uye kupatsanurwa kwemusika - pane zvachose mutengo kune vezvenhau. Izvo zvakati, kune zvakare mukana unoshamisa wekutora chikamu chemusika nekuita tarisiro uye vatengi kuburikidza nesocial media - kunyanya kana makwikwi ako asina!
A # 1 Chinzvimbo paGoogle Mhedzisiro mu18.2% CTR
Windows Live Munyori kune WordPress
Jul 26, 2011 pa 9: 46 AM
Mumwe munhu anogona kutsanangura iyo twitter stats ndapota? zvinoita kunge kuratidza kudyara kunopfuura kudzoka - uye nemitengo yemwedzi nemwedzi chete nhamba yakakamurwa negumi…?
Jul 26, 2011 na2: 51 PM
Chaizvoizvo ichokwadi kuti munhu anofanirwa kuverengera mutengo wemagariro enhau sechikamu chemusika wekutengesa. Dambudziko rangu guru nderevatengi vanoda "kukwira pari zvino" nevezvenhau, pasina hanya nenzvimbo yayo muhurongwa hwese, kana kune icho hachisi mushonga-zvese zvebhizimusi richangotanga kuti ribudirire kamwe kamwe husiku ndatenda kune mashoma mablog blog!
Jul 26, 2011 na9: 15 PM
Ah Doug… Usandiudze kuti hausi kuona chakashata nemufananidzo uyu…
Chekutanga imwe diki iri pachena nyaya: Twitter's pamwedzi yekudyara / yekudzosa manhamba anochinjiswa kana mepu kune wega muteveri kukosha / mutengo. Asina chokwadi kuti ndechipi asi tichifunga saizi yechikamu icho muiyo infograph, ndinotenda ndiyo nhamba dzakanakisa dzekudzoka dzakakwirira kupfuura kudyara kwaifanirwa kuratidzwa. Zvisinei, ndakaisa iyo pasi pe "typo".
Iyo chaiyo nyaya ine uyu mufananidzo kuwirirana vs. zvakakonzera. Mhedziso inonongedzwa yegirafu iyi ndeyekuti kuwana vanhu kuti vakutevere kana kuve fan yako kunokonzera kuti vashandise yakawanda. Pane kuwirirana pakati pekushandisa uye fan, asi izvo hazvireve kuti pane zvakakonzera pano. "Fans vane 28% yakawanda kupfuura vasiri-vateveri kuti varambe vachitenga maraki yako"? Ini handifunge kuti mhedzisiro inoda infograph. Kana ndikaisa izvo mune mamwe mazwi akajeka, ungati here vanhu vanozvitora sevadi veColt vanopinda mitambo yakawanda yeColt uye vane majezi mazhinji eColt kupfuura avo vasingazvione sevateveri veColt? Mhinduro yakapusa neiyoyo, handizvo here? Saka hazvisi zvekuti vateveri vako veMcDonalds Facebook vari kushandisa imwe mari nekuti ndivo vako veFacebook mafeni. Imhaka yekuti vari kunge vari kushandisa mari yakawanda kare uye ivo vanokuda kare kuti vakasarudza kuve wako Facebook fan. Izvi hazviite mune ino fomu yazvino kutsigira thesis yauri kuzoita kuti mumwe munhu apedze mari yakawanda pazita rako nekuvaita ivo Facebook fan kana Twitter muteveri. Saka ini chaizvo handaizonyora chikamu ichocho pasi pe "Mabhenefiti" asi kungori pasi pemusoro unoti "Hmm…".
Ikozvino chingave chiri kunyatsonakidza muhuwandu ndechekuti kana vachikwanisa kuratidza kuti kubva kune vese maFacebook mafeni auinayo, vaishandisa marii pagore / pamwedzi / chero vasati VAVA vateveri vako maringe nemarii yavakashandisa PASHURE pekuva fan uye nekuda kwemishandirapamwe yauri kuita paFacebook. Ndiko kudzoka chaiko pane yako mari. Ehe, izvo zviri padhuze zvisingaite kuteedzera.
Ini handisi kureva kuti kufaranuka kwenhau hakuna mabhenefiti Ndiri kungotaura kuti manhamba asina kugadzirirwa sezvakaratidzwa mune iyi infograph haanyatso kubatsira kuita iyo kesi kana kubatsira mumwe munhu kuita sarudzo yekupinda munhau dzezvemagariro. Kana paine chero nhamba dzemitengo dzinotyisa vanhu vanoziva kuti mabhenefiti akaratidzirwa muiyo infograph haaratidzi chero bhenefiti yechokwadi yekururamisa mutengo.
* anobvisa ngowani inotsigira dhiabhori *